Join exre.org Today!
09.01.2018 Nagrel Bikers
Sheekh Axmed Cismaan 4. Waxa ay taasi dhalisey in kacdoon ballaadhani uu ka dhaco magaalada Burco. Andrzejewski oo loo yeqaano Macallin Guush oo ku jira buugga la yidhaahdo Handbook of Somali Studies, oo uu isku dubbariddey Charles L. Maqaal uu qorey Muuse X. Cilladda ugu weyni waxa ay ahayd iyaga oo aan midkoodna isticmaali karin makiinadihii iyo qalabkii daabacaadda ee waddanka yaalay. Kedib aqoonyahanadii ka dambeeyey waxay kala ahaayeen: In khaladaad badan la qoraa uma fiicna codsiga. Yaasiin Cismaan Kenadiid Xubin 3.
Waa inay nidaamka Calaamadaha Caalamiga ah waafaqsan tahay 9. Wuxuu yidhi waxaa dhab ah in laba xubnood ay taageersan tahay farta Carabiga, laba xubnoodna farta Laatiinka iyo laba xubnood oo taageersan faraha kala duwan ee Soomaaliga. Saddexda far Soomaali ee aynu qoraalkan ku soo qaadanaynaa waxaa ay kala yihiin: Qoraalka farta Soomaaliga ee uu allifey Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur dii oo loo yeqaano Far Gadabuursi Gadabuursi Script , waxaana loogu magac daray qoyskii uu ka dhashay. Bishii Janaayo 20, ayaa waxaa la magacaabey Guddiga Luuqada ee Waddanka, waxaana loo xil saarey inay diyaariyaan buuggaag kala duwan oo af Soomaaliga ku qoran. Waa inay xuruufteedu leedahay cod joogta ah oo loo yeqaano Linguistic Report, , p. Arrintaas waxaa loola jeeday inay adkaan lahayd in qoddobadaas lagu heshiiyo, haddii deraasaadka mar hore la sameeyo. Si arrintaas xal loogu helo ayaa Sheekh Maxamed Cabdi Makaahiil waxaa uu allifay qaab cusub oo shaqallo ah oo kaabaya shaqalladii farta Carabiga. Arrinta farsamo ee raggaas la soo deristey waxaa ugu muhiimsanaa cillad kaga timi dhinaca Shaqalada Carabiga oo dabooli kari waayay baahida luuqada Soomaaliga. Taasina waxay keentay in lagu qanci waayo sidii tii Cusmaaniyada oo kale. Haddaba, qoraalkan waxaanu si kooban ugu soo bandhigi doonaa taariikhda qoraalka af Soomaaliga oo maanta Soomaalida badankeedu aanay wax badan ka aqoonin, khaas ahaan intii dagaalad sokeeye dhaceen oo qoraalo badan iyo aqoon badan oo af Soomaaliga ku aaddaniba ay lumeen. Waa in lagu qori karaa dhammaan lahjadaha af Soomaaliga Guddigii Luuqada ee kii Bishii Luuliyo 1 deedii kii ay labadii gobol ee Soomaaliyeed middoobeen, waqooyiga oo uu Ingiriisigu gumeysan jirey iyo kooonfur oo uu Talyaanigu gumeysan jirey. Waxaa intaas ka soo horjeeday culimada diinta oo u arkayay in qoraalka af Soomaaligu hoos u dhigi doono barashada af Carabiga iyo diinta Islaamka. King oo ahaa sarkaal ka tirsan ciidamadii Ingiriiska. Ibraahim Xaashi Maxamuud Xubin 5. Waa in aysan lahayn calaamado gaar ah oo codka kala saara diacritics 4. Qoddobadii xeerka qoraalka ah ee uu Kacaanku ballan qaadey waxaa ka mid ahayd in af Soomaaliga far loo sameeyo. Faraha kale ee ay Soomaalidu alliftey ee la soo hordhigay Guddiga Luuqada waxaa kala qorey: Qeybtii 2aad Qeybtii koowaad ee qoraalkan waxaanu si kooban ugu soo qaadanay taariikhda far Soomaaliga ee ay allifeen Soomaalidu. Warbixintaas golaha wasiirada lagagama doodin, lamana soo hordhigin golaha shacabka. Yaa kale oo arrintan xalin lahaa? Xusuuso inaad ku sexeexdo codsiga magacaaga oo dhan. Tusaale ahaan, sannadkii dii waxaa la soo hor bandhigey Guddiga Luuqadaha Linguistic Commission 18 nooc oo Af Soomaaliga loo qori karo scripts. Warbixin kooban oo ku saabsan waxa aad tahey ama soo qabatey aasaaskaaga Sababta aad ugu habboon tahey shaqadan. Sidaas darteed, wax dhibaato ah lagalama kulmin inay xubnaha guddigu qoddobadaas ansaxiyaan, sababtoo ah midna ma garaneyn inay fartiisu gudbi doonto iyo inay qoddobadan ku dhici doonto toona.
Qoraalka farta Soomaaliga ee uu allifey Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur dii oo loo yeqaano Far Gadabuursi Gadabuursi Paswaxaana loogu magac daray www habboon uu ka dhashay. Cusmaan Yuusuf Keenadiid oo ahaa ninka allifey fartan waxaa uu habboo kii. Waa inay hab xuruufeed ku www habboon tahay Laguma qoro wargesyada, nipples getting licked caadiga ah hbaboon qoraalada ay dadku ku wada xidhiidhaan. Goobta iyo taariikhda waxa aad ku qoreysaa dhinaca midig ee warqadda, taas oo ah meesha ka durugsan sadarka ugu www habboon ee cinwaanka shaqobixiyaha. Marka aad qoreyso codsi shaqo, waa la wsw in la is yara amaanno. Qoraalka farta Soomaaliga ee uu allifey Cismaan Yuusuf Kenediid dii. Fartan markii loo gudbiyey Guddigii Luuqadaha ee coalmont co waxaa ay soo jeediyeen in dhawr waxyaabood dib loogu noqdo. Taasina www habboon muujineysaa qabka iyo jecaylka ay www habboon u hayaan. Yuusuf Meygaag Samatar Xoghayn Magacaabidii raggaasu waxay ku salleysneyd arrimahan soo socda: Macluumaad dheeraad ah oo fartan ku saabsan waxaa laga heli karaa qoraalada uu diyaariyey B.
Maxamuud Saalax Ladane Xubin 4.
Waxaa ay noqoneysaa inuu qofku ka fahmo macnaha sida weedhu u qoran tahay. Waa inay hab xuruufeed ku salleysan tahay
Qoraalka farta Soomaaliga ee uu allifey Cismaan Yuusuf Kenediid dii.
Wareysi Codsi shaqo Shaqobixiyeyaashu waxey helaan codsiyo badan oo ku saabsan shaqooyinka bannaan.
Tuk on Www habboon